Ukomisa i-Oven Factory-i-China Yokomisa abavelisi be-oven, ababoneleli
DRK612 Ubushushu obuphakamileyo Ukuqhuma Kokomisa Ioven-Fuji Controller
I-oven ye-electrothermal high-temperature blast drying drying isetyenziswa ngokubanzi kumbane kunye noomatshini, iikhemikhali, iplastiki, imboni yokukhanya kunye namanye amashishini kunye neeyunithi zophando lwezenzululwazi zokubhaka, ukomisa, ukunyanga, ukunyanga ubushushu kunye nokunye ukufudumeza kweemveliso ezahlukeneyo kunye neesampuli.
DRK252 Drying Oven kunye Standard Large-screen LCD
I-1: Umboniso we-LCD oqhelekileyo wesikrini esikhulu, bonisa iiseti ezininzi zedatha kwisikrini esinye, ujongano lomsebenzi wohlobo lwemenyu, kulula ukuyiqonda nokusebenza.I-2: Imodi yokulawula isantya se-fan yamkelwe, enokuthi ihlengahlengiswe ngokukhululekileyo ngokweemvavanyo ezahlukeneyo.
DRK252 i-oveni yokomisa
I-oven ye-DRK252 yokomisa eyilwe yinkampani yethu yenziwe ngezinto ezigqwesileyo kunye nomsebenzi ogqwesileyo.Yenziwe kwaye yenziwe ngokuhambelana nemigangatho efanelekileyo yezixhobo zokuvavanya.
I-oven yokumisa i-vacuum yenzelwe ngokukodwa ukomisa ubushushu obubuthathaka, ukubola ngokulula kunye nezinto ezixutywe ngokulula.Inokugcina iqondo elithile le-vacuum kwigumbi lokusebenza ngexesha lomsebenzi, kwaye inokugcwalisa ingaphakathi ngegesi ye-inert, ngakumbi kwezinye izinto ezinobumba obunzima.
DRK-BPG nkqo Blast Drying Series Series
I-oven yokuqhushumba ethe nkqo ilungele iintlobo ngeentlobo zeemveliso okanye izixhobo kunye nezixhobo zombane, izixhobo, amacandelo, i-elektroniki, umbane kunye nemoto, inqwelomoya, unxibelelwano, iiplastiki, oomatshini, iikhemikhali, ukutya, iikhemikhali, ihardware kunye nezixhobo kwimeko yobushushu obungagungqiyo.